&Proud ၏ Co-Director ကိုလှမြတ်ထွန်း / &Proud
By ဇူးဇူး 30 January 2019
LGBTIQ ပွဲတော်ကို ဦးစီးကျင်းပသည့် &Proud အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း၊ ပွဲတော်ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်၊ လက်ရှိ မြန် မာ့လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း LGBTIQ များ၏ အခြေအနေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ၎င်းတို့အပေါ် ထားရှိသည့် သဘော ထားအမြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ &Proud ၏ Co-Director လည်းဖြစ် LGBT အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် Colors Rainbow ၏ Deputy Director လည်းဖြစ်သူ ကိုလှမြတ်ထွန်းကို ဧရာဝတီသတင်းထောက်ဇူးဇူး က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါသည်။ &Proud သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ L LGBTIQ လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပွဲတော်များ စုစည်းပြုလုပ်ပေး သည့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ပထမဆုံး ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့တခုဖြစ်ပြီး Colors Rainbow၊ Abadi Art နှင့် YG events တို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။
မေး – &Proud ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ – ကျနော်တို့ ၂၀၁၄ မှာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် စလုပ်မယ်ဆိုတုန်းက ဘယ်လိုနာမည်ပေးရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြ တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတဲ့သူတွေရဲ့ အကြောင်းကို ပြချင်တယ်။ ပြီး တော့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတဲ့ လူကြီးတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ LGBT တွေ အကုန်ထွက်လာစေချင်တယ်။ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး နေနေရ တယ်။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုအပေါ် စိတ်မလုံခြုံတဲ့လူတွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးချင်တယ်။
ပြီးရင် သူတို့တွေ ထွက်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးချင်တယ်။ Proud(ဂုဏ်ယူစေချင်)ဖြစ်စေချင်တာ။ ဥပမာ- I’madoctor and proud. I’malawyer and proud. I’m gay and proud. စသဖြင့်။ ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးမှာ proud ဖြစ်သွားရတဲ့ဟာနဲ့ ဆုံးချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီ &Proud (and Proud) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ &Proud ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က LGBT တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုစေဖို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ LGBT လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စုစည်းပေးဖို့နဲ့ LGBT ရေးရာတွေကို သတိထားမိကြစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – &Proud အနေနဲ့ LGBTIQ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လုပ်တာ ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
ဖြေ – &Proud အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ၂၀၁၄ က စလုပ်တယ်။ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီ။ ဒီ ၅ နှစ်မှာ စပြီးတော့ Yangon Pride ဆိုပြီးသုံးတယ်။ Yangon Pride လို့ သုံးခြင်းဟာ အင်တာနေရှင်နယ် Pride လှုပ်ရှားမှု(Movement)၊ LGBT လှုပ်ရှား မှုမှာ ရန်ကုန်ကလည်း ပါချင်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ Pride ဖြစ်လို့ရတယ်။ Pride လုပ်လို့ရတဲ့ အခြေအနေလည်း ဖြစ် တယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် ဒီနှစ်မှာ Yangon Pride ဆိုပြီး &Proud Film Festival ကို စတင်ပြီး နာမည် ထပ်ပေါင်းလိုက် တယ်။ Yangon Pride အနေနဲ့ ပွဲကျင်းပရုံ ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ LGBTIQ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင် နိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မေး – Yangon Pride ဆိုတော့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တခြား LGBTIQ တွေကို ကိုယ်စားမပြုဘူးလား။
ဖြေ – ပြုပါတယ်။ Yangon မှာလုပ်တဲ့ Pride ပွဲတော်ပေါ့။ Yangon Pride ဆိုတာ ရန်ကုန်က သူတွေပဲ Pride တာ မဟုတ် ဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီ &Proud ရုပ်ရှင်ပွဲတော်က ရန်ကုန်မှာတင်မကဘူး။ တခြားနယ်မြို့တွေကိုလည်း ၂၀၁၈ ကဆိုရင် ပုသိမ်၊ ရွှေညောင်၊ ထားဝယ်၊ ပခုက္ကူ၊ မန္တလေး ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း မန္တလေး ပြန်သွားမယ်။ ပြီးရင် မုံရွာ သွားမယ် စသ ဖြင့် စီစဉ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
မေး – မြန်မာနိုင်ငံမှာ LGBT အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေတာတွေ ရှိသလို အခုလို ပွဲတော်တွေ လည်း လုပ်တယ်ပေါ့။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ လက်ရှိ LGBT တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အမြင်သဘော ထားတွေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ – ၂၀၁၄ နဲ့ ခု ၂၀၁၉ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ၂၀၁၄ တုန်းက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ပြင် သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာပဲ ကျင်းပခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈ ကစပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သခင်မြပန်းခြံမှာ ကျင်းပတယ်။ ခု ၂၀၁၉ ရဲ့ ၅ ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလည်း အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဒီမှာပဲ ကျင်းပတယ်။ တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြော လို့ရတယ်။ လူတွေရဲ့လက်ခံမှု၊ အမြင်ပြောင်းလဲလာမှုကလည်း အရင်ကထက် တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒီ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်လာပြီးတော့ ဖွင့်ဟထွက် လာတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိလာတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်က အဲဒီလိုမျိုး လူငယ်တွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးတယ်။ ပြီး တော့ သူတို့တွေက အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လို လူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ၊ ရန်ကုန်မှာ၊ နိုင်ငံတွင်းမှာ၊ တ ခြားနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိလာခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ မမှားပါလား၊ ငါတို့ မှန်ပါလား၊ ငါတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုက ငါတို့ ရဲ့ မှန်ကန်မှု ရိုးသားမှုဆိုတာ သိလာပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖွင့်ဟလာတာ၊ ထွက်ပေါ်လာတာ ရှိတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲက တခုပေါ့။ တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး – ဒီနှစ်ပွဲတော်ရဲ့ Theme က ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပါလဲ။ &Proud LGBTIQ Hero Award ဆုတွေကိုရော ဘယ်လို သတ် မှတ်ချက်နဲ့ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာပါလဲ။
ဖြေ – တနှစ်ရဲ့တနှစ် Theme က မတူပါဘူး။ ဒီနှစ်ရဲ့ အဓိက Theme က Hero ဖြစ်ပါတယ်။ LGBT လှုပ်ရှားမှု လုပ်ရာမှာ တကယ့်ကို Hero တွေ အများကြီးရှိတယ်။ Hero Award အဖြစ် မရွေးချယ်ပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ Hero တွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကို အထူးတလည် Hero တွေလို့ အသိအမှတ် ပြုတာထက်စာရင် နောက်ကထပ်လိုက်လာတဲ့ Hero အသစ်တွေ၊ လူစွမ်းကောင်းအသစ်တွေကို ထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
LGBT Hero တွေ ရွေးချယ်တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ LGBT အရေးကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံလုပ်တဲ့ သူတွေထဲ ကနေ ချွန်ပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေ၊ လူ့လောက အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်တဲ့ စံပြတွေကို ရွေးချယ် ပြီး LGBT Hero Award ဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ တယောက်က ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Gay ဖြစ်တည်မှုကို ပွင့်ပွင့်လင်း လင်း ဖွင့်ဟလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း သူလုပ်သွားတဲ့အလုပ်တွေ။ ရုပ်ရှင်မင်းသား တယောက်အနေနဲ့ သူဒီလိုမျိုး ရှေ့ဆောင် လမ်းပြ စံပြအဖြစ် ရပ်တည်လာခြင်းဟာ တခြားလူငယ်တွေ၊ ပြီးတော့ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်မှာ ရှိတဲ့သူတွေကို ပညာပေးတဲ့၊ အမြင်ပြောင်းသွားစေတဲ့ ဟာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အဓိကက ဒီ LGBT အရေး ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ လုပ်တဲ့သူတွေ၊ အောင်မြင်ပြီး စံပြ အနေနဲ့ သူ့နယ်ပယ်ဒေသမှာ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဦးဆောင်တဲ့သူတွေကို LGBT Hero အနေနဲ့ ရွေးချယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ လိင်တူချစ်သူစုံတွဲတွေ တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာမျိုး ပိုတွေ့လာရတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တော် တော်များများက ဝေဖန်ကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို မှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – လိင်တူလက်ထပ်တာတွေ နယ်တွေ၊ မြို့တွေမှာ တွေ့လာရတယ်။ ဒါကို လက်ခံတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ လက်မခံတဲ့သူ၊ ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ ပညာပေးမှုတွေလုပ်ရအုံးမယ်။ ဘယ်နေရာမှာတော့ လို အပ်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာတော့ ဖိအားပေးဖို့ လိုနေတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် activity တွေ မြင်လာတာပေါ့။ ပညာပေးတာ ကတော့ လုပ်နေရမှာပဲ။ ပညာပေးမှု မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်အရာမှ တည့်တည့်မတ်မတ် ဖြစ်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အ လုပ်ကို ပိုပြီး ထောင့်စုံဘက်စုံက လုပ်နိုင်အောင် ဝေဖန်ကြတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ ဒါတွေအတွက်လည်း ကြိုဆိုတယ်။ ဒါတွေကို လက်ခံပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့၊ ပညာပေးဖို့၊ အခုလိုလုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဖို့ အစီစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။
မေး – LGBT တွေ အနေနဲ့ရော ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်မလဲ။
ဖြေ – ကျနော်တို့ LGBT တွေဘက်ကိုလည်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ သူများအခွင့်အရေးကို လေးစား ဖို့၊ အခွင့်အရေးနဲ့ အတူတူကပ်ပါလာတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုတာတွေလည်း အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအတွက်ကိုလည်း LGBT တွေကို အမြဲသတိပေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့လက်လှမ်းမီရာပေ့ါ။ ကျနော်တို့လည်း အများကြီး မလုပ်နိုင်ပေမယ့် လုပ်နိုင်သ လောက်ကို ပညာပေးတာတွေ ရှိတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းတွေ ပေးတယ်။ ပညာပေးတွေလုပ်တယ်။ အခွင့်အရေးနဲ့ ကပ်ပြီးပါလာတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းကိုလည်း သတိပေးတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်။
မေး – LGBT အရေး ဆောင်ရွက်သူအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ LGBT တွေ ပိုများလာတယ်လို့ ထင်လား။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ် တမ်းကောက် ထားတာမျိုးရှိလား။
ဖြေ – LGBT ပိုများလာတယ်ဆိုတာကတော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ LGBT ဆိုတဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့လက်ခံလာတယ်။ ရင်ဆိုင်လာတယ်။ ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့အသိတွေ သိလာတဲ့အတွက် ရှေ့ကိုထွက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် ပွင့်လင်းလာတယ်။ လွတ်လပ်လာတယ်။ ရဲဝံ့လာတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးလာတဲ့ သူတွေ များလာတယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး အလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖြစ်နေ တာ။ ပိုပြီးမြင်သာထင်သာ ရှိလာတယ်။ အမြင်ကျယ်လာတယ်။ ပိုပြီးလက်ခံလာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ တော်အဆင့် မူဝါဒတွေ၊ ဥပဒေရေးရာတွေမှာလည်း လိုနေတဲ့၊ ဟာနေတဲ့ အချက်အလက်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ တန်းတူညီမျှမှုကို အာမခံတဲ့ ဥပဒေ မရှိသေးဘူး။ တန်းတူညီမျှမှုကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မူဝါဒမျိုးတွေ အားနည်းနေသေးတာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ လုပ်ဖို့ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းတင်မကဘူး။ အခြားလူ့အခွင့်အရေး လုပ်တဲ့လူတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေ အကုန်လုံး စုပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း LGBT တွေ ပိုများလာခြင်း မလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ စစ်တမ်းကောက်ထားခြင်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ယေ ဘုယျအားဖြင့် သုံးသပ်ချက်အရဆိုရင် ပွင့်လင်းလာတဲ့ လူငယ်တွေ၊ လူလတ်ပိုင်းတွေ များလာတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် ရဲတင်းလာတယ်။ သတ္တိရှိ လာတယ်။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုအပေါ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်လာတယ်။ ဖွင့်ဟလာတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး – LGBT တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အခြေအနေတွေကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ – လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေက ရှိနေတယ်။ ဥပမာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို ပြောင်းလဲခံယူထားတဲ့ ယောကျ်ား လျာ မိန်းမလျာတွေဆိုရင် သူတို့တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အရေးက အရမ်းကိုနည်းတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်း လုပ်လို့မရ ဘူး။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလည်း လက်မခံချင်ကြတာရှိတယ်။
အင်တာဗျူးတဲ့ စာရွက်(CV)မှာ မောင်/ကိုလို့ တပ်ထားတယ်။ ဝင် လာတဲ့သူက မိန်းမပုံနဲ့ ဝင်လာတယ်ဆိုရင် အင်တာဗျူးကတည်းထဲက ငြင်းပယ်လိုက်တာမျိုး။ အမြဲတွေ့ရတယ်။ ကြားသိနေ ရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲခြားခံရမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူတွေကို တားဆီးထားတဲ့ မူဝါဒတွေ မရှိသေးဘူး။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခွဲခြားခံရမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မူဝါဒတွေ ချမှတ်ထားတာရှိပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အား နည်းနေသေးတော့ ဒါတွေကို တဖက်က မြှင့်တင်ဖို့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိနေတယ်။
မေး – အခုနောက်ပိုင်း LGBT နောက်မှာ IQ ဆိုပြီး ထပ်တိုးလာတာ တွေ့တယ်။ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။
ဖြေ – LGBT နောက်မှာ IQ ကို နောက်ပိုင်း ထပ်ထည့်လာတယ်။ အရင်က မထည့်ဘူး။ I ဆိုတာက Intersex (မွေးက တည်းက ယောကျ်ားမိန်းမ အင်္ဂါနှစ်မျိုးလုံး ပါတဲ့သူတွေ) ပထမ တော်တော် စဉ်းစားတယ်။ I ထည့်မလား လောလောဆယ် ငါတို့ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာလည်း မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းလုပ်လာတဲ့အခါမှာ I တွေ အများကြီး တွေ့လာတာ ရှိတယ်။ ပါလာပြီဆိုတော့ သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုရတော့မယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတော့မယ်ဆိုပြီး I ထည့် လာတယ်။ Q ဆိုတာ Queer တချို့ကျတော့ ကျနော်/ကျမ Lesiban လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော် Gay လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျမ Transgender လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်/ကျမတို့က Queer။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Queer လို့ ကိုယ့်ဘာသာ လက်ခံလာတဲ့သူတွေ များ လာတဲ့အခါ ထည့်ရမယ်ဆိုပြီး LGBT ကနေ IQ ဆိုပြီး ကိုယ်စားပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ အဲဒီလို နာမည်တပ်တာ တော့ ၁/၂ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
မေး – LGBT ပွဲတော်တွေ ကျင်းပတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာများ ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ – အဓိကက LGBT နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာက ဒီ LGBT တွေရဲ့ ပွင့်လင်းမှု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးဖွယ်ကောင်း တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အထူးသဖြင့် လူလူချင်းပဲ ခင်ခင်မင်မင် ရှိတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိတယ်။ ခံစားချက်ရှိတယ်။ အဓိကက လူလူချင်း သဟဇာတဖြစ်ဖို့။ လူလူချင်း လေးစားမှုတွေ ပိုပြီးတော့ မြင့်တက်လာအောင်၊ အထင်အမြင်လွဲတာ တွေ၊ နားလည်မှုလွဲတာတွေ ဥပမာ- gay ဆိုတာက မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာတွေကို ပြန်ပြီး ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ သတင်းတွေ ပေးချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အနုပညာဆိုင်ရာဘက်ကနေ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လုပ်ပြီးတော့ အခုလိုမျိုး ပညာပေး ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လုပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ဝင်ကြေးမရှိပါဘူး။ ဝင်ကြေးကောက်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိက ဒါက ပညာပေးတဲ့ပွဲတွေ။ လာပြီးတော့ ပျော်လို့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ တိုးအောင် လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ ဂိမ်းတွေရှိမယ်။ အစားအသောက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီနေရာက အကုန်လုံးအတွက် လုံခြုံတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ခွဲခြားတာမျိုး မရှိဘူး။ အကုန်လုံးကို တန်းတူ ညီမျှစွာ ဆက်ဆံတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် မေတ္တာထားပြီး ဆက်ဆံတဲ့နေရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို လာဖို့ ဖိတ် ခေါ်ပါတယ်။
မေး – LGBT ကို လက်မခံနိုင်သေးတဲ့ သူတွေကိုရော ဘာများပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ – LGBT ကို လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်း ဆိုတာထက် LGBT တွေ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ၊ မိသားစုထဲ မှာ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းထဲမှာ ရှိနေတာကို မြင်အောင်ကြည့်ပေးဖို့အတွက် အရေးကြီးတယ်။ လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်းက တဦးတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာ မူတည်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်။ ဒါပေမယ့် ခုနက ပြောသလို ရှိနေတာကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ လက်မခံဘူးဆိုရင်တောင် ဘာဖြစ်လို့ လက်မခံရတာလဲ။
သူတို့က မှားလို့လား ငါက မှားလို့လား ဆိုတာကို တချက်ပြန်ပြီး စဉ်းစားသုံးသပ်စေချင်တယ်။ လူကို လူဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲ သတ်မှတ်ပြီး လူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာက ယောကျ်ားချင်းချစ်လို့၊ မိန်းမချင်းချစ်လို့၊ ယောကျ်ားဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ မိန်းမစိတ်ပေါက်နေလို့ဆိုတာတွေ ခွဲခြားနေမှာထက်စာရင် လူပီသဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာလေး အသိပေးချင်တယ်။ လူရယ်လို့ မွေးဖွားလာလို့ရှိရင် လူ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ တန်း တူအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ၊ အပြောတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေဟာ အခြေခံ လူတဦးရဲ့ ရ ပိုင်ခွင့် အခွင့်ရေးတွေကို မြှင့်တင်ပေးလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်းဆိုတာထက် ရှိနေခြင်းကို မြင်အောင် ကြည့်ပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကို တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Topics: &Proud, LGBT